VOT : MITAKY AMIN’NY SADC NY FIHAONANA ALOHAN’NY 26 JONA – MyDago.com aime Madagascar
Nirodorodo teny amin’ny biraom-pifandraisan’ny Sadc eto Antananarivo teny Ankorondrano androany ny Vondron’Olon-Tsotra na VOT. Ny biraom-pifandraisan’ny Sadc dia efa nifindra etsy Ankorondrano, village des jeux, fa tsy eny Ivandry intsony. Araka ny nambaran-dRamatoa Sarah Zoé mpitarika ny VOT dia fanamafisana ny fitakiana izay ataon’izy ireo ny hetsika natao androany. Takian’izy ireo ny hanatanterahana ny fihaonana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy ny filohan’ny tetezamita Rajoelina eto Madagasikara, alohan’ny 26 Jona izao. Ny antony hoy Sarah dia efa maro ny fihaonana natao tany ivelany fa tsy nahomby nefa mijaly ny vahoaka. Amin’ny maha olontsotra tsy manao politika anay hoy izy dia manana adidiy izahay amin’ny zavamisy eto amin’ny firenena dia ny krizy lavareny hanentana ny vahoaka handray andraikitra. Tsy eto an-toerana ny solontenan’ny Sadc, ka ny adjoint no nandray ny delegasiona avy amin’ny VOT. Nanambara ny adjoint nisolo toerana ny solontenan’ny Sadc fa efa voaray ny taratasy ka dia ampanantsoina tsy ho ela ny VOT. Rehefa avy eo moa dia nirodorodo indray teny amin’ny biraon’ny firenena mikambana nanatitra ny taratasy ihany koa ireto solontenan’ny VOT ireto.
9 pensées sur “VOT : MITAKY AMIN’NY SADC NY FIHAONANA ALOHAN’NY 26 JONA”
Aleo isika malina re tompoko ô!
Sao ho hararaotiny mpamono ny fihaonana eto andrenivohitra io:
Sahirantsaina @ « euro » ny mpanjanaka antsika izao ary eo ny vahiny afa tia hanararaotra koa hangalatra aty amintsika, dia hasavorivoriana isika,anivony matanjaka, mody miafina ambadiky ny BRICS, CIVETS, dia very ramalagasy, indrindra efa nahilika alavitra ny filoha M.Ravalomanana.
Tokana iny antsika iny ka vonona hampiatra fiarovan avo ho azy ve iskika e?
Marina ny anao Randria!!aleo Mailo hatrany fa tsy kely lalana ny ratsy.
Azo atao anie ny mampiantso ny miaramilan’ny SADC na izay iraky ny CPS fa izany hoe tokony homanina dieny mialoha izany.Tsy nailika mihintsy I Dada raha nihevitra ho natao ao Tanà ny fihaonana.Aza dia be fanahiana loatra e
Ankoatran’izany dia raha lasa ny vazaha ka miditra ny austaliana na ny alemana ka rehefa manaiky ny hanome 65% ny vidin’ny solika dia arahaba soa arahaba tsara e.Isika tsy afaka ny hitrandraka an’io irery dia tsy maintsy miankina amin’ny vahiny manaja ny fifanarahana.
19 juin 2012 à 11 h 33 min
Marina anie fa tsy afaka hivoatra irery isika e!
Fahatarana sy fahantrana izay tsy izy no misy antsika: ara-tsaina sy ara-ekonomika…
Tsy misy mety maha sahy mihenjana raha misy fifandrarahana ara-barotra miaraka @ vahiny samihafa.
« Tairina tapany….dia mandoha erany » ary mihoatra izany aza satria vidina @ millions sy villa-4*4 na « nationalité » ny tompontany (erantany io,fa tsy isika gasy irery an)..dia votsotra varoboba ny haren-tany notiliny « grandes puissances ».
Dia mihambo ny hoe nanao « grandes écoles » ka izao miverimberina izao foana ny tranga mamotika antsika sy ny firenena nalatsaka anaty fahantrana tsy fidiny.
Sady efa tsy manana basy no tsy manana paika ady sy firaisan-kina (izany hoe manaraka tsy fidiny ny zotra harosony C.I sy ny tariny)…dia izao sisa isika…ka ????
Dia tohizako ny teninao Randria satria tsy misy manao propositions firy loatra isika malagasy ary raha mba misy aza manao zavatra na mitolona dia iny indray no tsikeraina sy ampidinina « ory hava-manana isika » indrindra ny merina ary » matesa rahavana raha maty aho » ary indrindra mbola vidian’ny tsotsoka vola, dia manisy ny an’ny tenany ihany.Miresaka firaisan-kina ianao na paik’ady, efa nanao izahay tao amin’ny lafy8 : http/::lafy8.forumactif.ca .Fa ny tena ilaina dia tsy tsikera intsony fa soson-kevitra arahan’asa.
mba vondron’inona loatra ary itony manalabara-batana itony
mba teneno ry Sadec i zandrikely mba hihaino ny talahonay sy de8, fa ny vahoaka malagasy tsy misy mety manaraka anay intsony, izahay vitsikely, banderole novidian’ny dada sisa mba mameno ny filaharanay. ONU o, mba avoty ilay andriamanitray fa mbola manefa ny asa-ratsiny ao afrika atsimo ao izy, tratran’ny todin’ny ra nalatsany.
mba vondron’inona loatra koa ary itony manalabara-batana itony
Ampahatsiahiviko ihany fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka tamin’ny SADC fihaonana amin-drajoelina ,izay hatao ao anatin’ny rafitry ny feuille de route nosoniavina tany SANDTON..
Fantatry ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny antony nanosika azy hangataka izany fihaonana izany..:satria nitarazoka ny fanasoniavana ara-dàlana ny tondrozotra ,izay nolalaovin-drajoelina sy ny ministry ny fitsarana.., ka nanjary lalàna mitongilana ,tsy nanaja ny fisainan’ny tondrozotra mifanaraka (principe de consensualité)sy tsy manao fanavakavahana (principe d’ inclusivité)!
Neken’ny SADC ny fangatahan ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary nomanin’izy ireo aingana izany miaraka amin’ny fepetra hentitra mampitandrina ny mpihaona :
..mba hansoa aingana ny tondrozotra
..koa raha ny iray na izy roroa no manao sakana na mitsivalana tsy hanantanterahana io fanasoniavana io dia hisy sazy ,izay manala tsy handray anjara intsony amin’ny fihaonana..
Tsy nisy fanondroana ny toerana na ny andro na ny ora hihaonana..
Ary hambarako fa tsy ny toerana na ny andro hihaonana no no maika sy hilaina fantatra fa ny fisian’ny fihaonana.
Anisan’ny mandinika ny fanantaterahana o fihaonana io ny Filoha ,ary fantany tsara ny mahamety na tsy mahamety ny hanaovana izany eto ANTANANARIVO..!
Koa aoka Isika tsy hanao bondogerona na hitambezo..!
izay manao sakana na mitsivalana
20 juin 2012 à 18 h 57 min
de ahona kou ni manaraki
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA : TSY NANADINO NY ZANANY NA DIA ANY AN-TANY LAVITRA AZA
Suivant Article suivant : MAGRO BEHORIRIKA : NANAO ANTSO HO AN’NY SADC